I-Audio-Technica ATH-CK3TW, ikhwalithi engcono kakhulu? [UKUBUYEKEZA] | Izindaba zamagajethi
I-Audio-Technica ATH-CK3TW, ikhwalithi engcono kakhulu? [BUYEKEZA]
Umkhankaso kaKhisimusi ususondele futhi i-avalanche yonyaka esiyenzayo yokuhlaziya isondela ukuze ukwazi ukunquma ngendlela engcono kakhulu ngezipho ofuna ukuzinika abanye noma ukuzenzela zona. Kulokhu sikulethela okokuqala umkhiqizo ovela ku- I-Audio-Technica, umkhiqizo owaziwayo emikhiqizweni yomsindo.
Sivivinye ama-headphone we-Audio-Technica ATH-CK3TW TrueWireless, umkhiqizo wekhwalithi ephezulu kuzwi nasekusebenzeni ekuphakameni kokuhamba phambili. Thola nathi ngokuningiliziwe la ma-ATH-CK3TW futhi uma enikela ngomsindo we-Hi-Fi ukuthi abasebenzisi balo mkhiqizo odumile bawuthanda kakhulu.
Njengenjwayelo, sifuna ukukukhumbuza ukuthi phezulu sikushiyele ividiyo esiteshini sethu se-YouTube lapho uzokwazi khona ukubonga Unboxing womkhiqizo wakho konke okuqukethwe ebhokisini lawo, kanye nezithombe ezinemininingwane nokuhlolwa okuphelele okufanayo.
Ungathatha ithuba ubhalisele isiteshi sethu se-YouTube futhi usishiyele ukuthanda uma ukuthandile ukuhlaziywa kwevidiyo kwe-Audio-Technica I-ATH-CK3TW Futhi-ke uzosisiza ukuthi siqhubeke nokukhula futhi siqhubeke nokuletha imikhiqizo emihle kakhulu yazo zonke izinhlobo ku-Actualidad Gadget, ngezibuyekezo eziqotho kakhulu. Ubathandile? Zithenge ngentengo engcono> Ayikho imikhiqizo etholakele.
1 Idizayini: Half Bold
2 Amandla wobuchwepheshe, i-Hi-Fi ngefulegi ngalinye
3 Ukusebenza ngokuningiliziwe
4 Ikhwalithi yomsindo, ukuzimela kanye nesipiliyoni
Idizayini: Half Bold
Lawa mahedfoni avela ku- I-Audio-Technica Zinomklamo odonsela ukunaka kwethu ikakhulu ngenxa yocezu “lwendlebe” olunwetshiwe, kepha lokhu kunesizathu, sokufakwa kahle endlebeni yethu ukuze kuvezwe umuzwa omkhulu wokukhanselwa komsindo, futhi ngokokuhlola kwethu umqondo ukulungisa bese kuveza umphumela oyifunayo.
Lawa mahedfoni enziwe ngepulasitiki, njengoba bekulindelwe, futhi leyo yindlela abathola ngayo Isitifiketi se-IPX2 esingangenwa ngamanzi lokho kuzosivumela ukuthi sidlale nabo imidlalo ngaphandle kokwesaba ukulimaza izingxenye zabo.
Sine-8 pads yokuvumelanisa ihedsethi.
Ngokwengxenye yayo, sizokwazi ukuthola lawa mahedfoni ngamathoni amabili, amhlophe namnyama, ngokuthandwa ngumsebenzisi. Akunangozi kangako kulesi sici, okwenza ingxenye eyisicaba lapho izilawuli zokuthinta esizokhuluma ngakho ngokuhamba kwesikhathi zizotholakala.
Isikhathi sokukhuluma ngebhokisi, kimi iphuzu elibi kakhulu. Mhlawumbe inkulu ngokweqile, yize sibheka ukuthi inembobo ye-USB-C ngakolunye uhlangothi, kodwa awekho ama-LED akhombisa ukuzimela, kuphela i-LED yokushaja. Okufanayo kwenzeka ngosayizi wayo, inebhethri elikhulu, kepha ubukhulu bayo ngokuphelele bukhulu kakhulu kunabancintisana nabo, njenge-AirPods noma iFreeBuds Pro.
Amandla wobuchwepheshe, i-Hi-Fi ngefulegi ngalinye
Lezi zindlebe ze-TrueWireless zine- 5,8mm transducer, ngaleyo ndlela unikeza impendulo ku imvamisa kusuka ku-20 kuye ku-20.000 Hz nokuzwela kuka-98 db / MW, ngenhla kweminye imikhiqizo yokuncintisana. Sizungeza umkhiqizo nge- I-Ohm impudence, ngobuchwepheshe sibhekene nempisi embethe isikhumba semvu.
Sinemakrofoni yohlobo lwekhanda le-SMEM, lokhu kunokuzwela kwe-38 dB (1V / Pa ku-1 kHz), Umphumela esizokhuluma ngawo kamuva ezivivinyweni ezijwayelekile, futhi khumbula ukuthi kuvidiyo sinokuhlolwa okuningiliziwe kwemakrofoni ngokurekhodwa.
Ukuxhumana ne-emitter yomsindo sine-Bluetooth 5.0 enobubanzi obusondele ku-10m. Kulesi sigaba sithole umkhiqizo ngaphakathi kwalokhu okulindelwe ebangeni le-Bluetooth futhi ngaphandle kokulahleka koxhumano, ngokuba ngokusobala zixhuma ngokuzenzakalela.
Ngakolunye uhlangothi kufanele sikhumbule ukuthi i-earphone yangakwesobunxele ayinakusetshenziswa ngokwehlukana, okusho ukuthi, kubhangqwe ibhuloho elingenantambo eline-earphone yangakwesokudla, elibizwa nge- "Master" futhi eliphethe ukuxhuma nedivayisi yokuthumela nge-Bluetooth 5.0, iphuzu okufanele licatshangwe nobuchwepheshe obungimangazayo abaqhubeka basebenzise .
Lezi Audio-Technica Ayikho imikhiqizo etholakele.Banalokho okubizwa ngokuqinile yi- "auto-power", okungeyona into ngaphandle kokuxhuma okuzenzakalelayo okujwayelekile kumadivayisi abhangqiwe I-Bluetooth 5.0, Lokhu kusho ukuthi uma nje sizibeka ezindlebeni zethu zizobe sezivumelanisiwe vele.
Kulokhu, inkampani ibheja yonke into kumazinga weQualcomm, okokuqala nge-aptX codec ithandwa kakhulu futhi ikwazi ukukhiqiza umsindo we-HiFi ngaphandle kwentambo, esiwuqinisekisile ngoTidal kanye neHuawei P40 Pro yethu. Kodwa-ke, le divayisi inikeze ngekhwalithi ephezulu kakhulu futhi kunzima ukuhlukanisa ku-iPhone 12 Pro.
Kwenzeka into efanayo nge I-Qualcomm TrueWireless Stereo Plus ukunciphisa ukusilela lapho udlala ividiyo, noma I-Qualcomm cVc ehlaziya futhi ithuthukise umsindo wezingcingo kucatshangelwa ukuthi ithatha ini ngombhobho omlidirectional esike sakhuluma ngawo phambilini.
Ikhwalithi yomsindo, ukuzimela kanye nesipiliyoni
Siqala ngento ebaluleke kakhulu, ikhwalithi yomsindo:
Amaza aphansi: Zikhona impela, yize zichitha kakhulu kumaza aphezulu naseRock
Imvamisa emaphakathi: Amazwi avelela kakhulu ukunambitheka kwami, ikakhulukazi asetshenziselwa amahedfoni amaningi entengiso. Ihlukahlukene futhi izinsimbi ziyahlukahluka kakhulu, kepha kufanele ube ngumthandi walolu hlobo lomkhiqizo ukuze uwuthokozele okuhle I-raphsody ye-Bohemian, Mathupha ngizijabulele.
Amaza aphezulu: Alinganiselwe kahle, amazwi aphezulu kakhulu akhona, ngaphandle kokuncinza.
Ngithole umsindo ophukile noma ongcolile, okuyimpumelelo yangempela uma ubheka ukuthi sibhekene nama-headphone we-TWS nge-Bluetooth.
Ngezansi: I-Audio-Technica I-ATH-CK3TW Banikeza ukubukeka okumangazayo kuyo yonke imiqulu yabo, ngaphandle kokugqama kakhulu kumanani aphezulu, ngokunembile ngenxa yokuhlanzeka komsindo wabo.
Manje siya ngqo ekuzibuseni, umkhiqizo uthembisa amahora we-6 wokuzimela kwama-headphone kanye namahora angama-24 ngaphezulu ngebhokisi lokushaja, into ecishe yagcwaliseka ngokuphelele, Cishe amahora angama-26 sikwazile ukuyisusa ngendlela esisebenzisa ngayo. Amacala azokuthatha ngaphezu nje kwehora esewonke.
Icala, Kukhonjisiwe ukuthi ikhululekile futhi isebenza kahle yize isayizi wayo, inesistimu kamazibuthe enamandla, isisiza ukubeka ama-headphone endaweni ngaphandle kwezinkinga futhi kufakazele ukumelana nokuhlolwa kwethu.
Ungakuthola nakanjani lokhu Ayikho imikhiqizo etholakele. kanye newebhusayithi yayo esemthethweni (LINK).
Ikhwalithi yomsindo ononya nokucaca
Ibhokisi likhulu kakhulu
Ngaphandle kokufaka engozini ekwakhiweni
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izibuyekezo » I-Audio-Technica ATH-CK3TW, ikhwalithi engcono kakhulu? [BUYEKEZA]
I-Xiaomi Redmi Note 9 Pro imelana kanjani